gaabinta : UoN
Ha iloobin in aad wada hadlaan The University of Newcastle
Qorto The University of Newcastle
The University of Newcastle (UoN), aan rasmi ahayn loo yaqaan Newcastle University, Jaamacadda dadweynaha Australia aasaasay 1965, ayaa xarunteeda hoose ee Callaghan, xaafad ka mid ah Newcastle, New South Wales. Jaamacadda ayaa sidoo kale ka shaqeeya dhismaha ee Ourimbah,Port Macquarie, degmooyinka ganacsiga dhexe ee Newcastle iyo Sydney Singapore iyo.
Taariikh, Jaamacadda School Medical Newcastle ayaa hirgeliyey nidaamka waxbarashada dhibaato ku salaysan ee ay undergraduateBachelor barnaamijka Medicine - nidaam ka dib waajib in loo isticmaalo by Council Medical Australia Australia oo dhan. Waxaa hirgaliyey isticmaalka Baaritaanka Admission shahaadada hoose Medicine iyo Health Sciences (DADKA) ee 1990. UMAT ayaa tan iyo markii la aqbalay ballaaran by dugsiyada caafimaadka kala duwan ee dalka Australia sida shuruudaha xulashada dheeraad ah.
The University of Newcastle waa xubin ka mid ah Jaamacadaha Australia iyo Ururka si Advance Collegiate Schools of Business.
In 2015 Times Tacliinta Sare kaalinta Jaamacadda tirada Newcastle 2 Australia oo tiro 30 adduunka ee jaamacadaha ka yar 50 sano jir.
Dhisay on mabaadi'da sinnaanta, wanaagga iyo hawlgelinta, Jaamacadda Newcastle leeyahay sumcad sida hay'ad heer caalami ah oo saameyn ay gobolka u gaar ah gudahood, Australia oo dhan iyo adduunka oo dhan.
Our cilmi waa dunida heer oo kala duwan. barnaamijyada Our degree Waxaa caalamka naloogaga aqoonsanyahay iyo iskaashi iyo iskaashi naga eryi abuurnimo. Qalinjabiyeyaasha waa madaxda iyo ardayda ayaa isku diyaarineysa inay kala adduunka.
Waxaan kaalinta saddex boqolkiiba halkii top of jaamacadaha adduunka oo idil, waxaana kaliya jeestay 50.
At UoN waannu rumaysan qof awood iyo go'aan waa in ay helaan waxbarasho weyn iyo fursado fiican mustaqbalkiisa. Waxaan adag u shaqeeyaan si ay samatabbixin on ballan u leh helitaanka our, ka qaybqaadashada iyo guusha waxbarashada. sannad kasta, qaar ka mid ah 3,000 ardayda qoraan koorsooyinka naga awood kuwaas oo bixiya dariiqa inuu waxbarasho helo weyn iyo taageero si ay baraaraan duurka ay doorteen ee waxbarasho.
Tan iyo 1970 waxaan ku sameeyey gacan unparallelled waxbarashada asaliga ah ee Australia, waxaana sharfay in ay la xiriiraan qaar ka mid ah ardayda Indigenous ugu goolasha badan oo xeeldheer, aqoonyahano iyo cilmi ee dalka. Iyada oo ku dhowaad kala bar ah dhakhaatiirta caafimaadka Indigenous ee Australia isagoo ka soo qalin jabiyay UoN, waxaynu og nahay waxa aan samaynta farqi noloshooda iyo bulshooyinka badan, hadda iyo mustaqbalka.
Kuliyada Waxbarashada iyo Arts
School of Humanities iyo Social Science
Kulliyadda Engineering iyo Deegaanka dhisay
School of Electrical Engineering iyo Sayniska Kombiyuutarka
Kuliyadda Sayniska iyo Technology Information
School of Design, Isgaarsiinta iyo Technology Information
School of Environmental iyo Life Sciences
School of Sciences Biomedical iyo Farmashiyaha
School of Medicine iyo Caafimaadka Dadweynaha
site bushland loped in Shortland. Sida diiwaan koray, Jaamacadda bilowday barnaamij dhismaha waaweyn iyo dib goobta Shortland galay campus Callaghan ah, magacaabay Sir Bede Callaghan, aasaaska xubin ka mid ah golaha University iyo madax sare ka 1977 si ay u 1988.
Ardayda jaamacadda dabaal Maalinta madaxbannaani 1 July ee sanad kasta. Sida laga soo xigtay ilo xaqiijin, madaxbannaani rasmi ah waxaa lagu xusaa 1 January 1965 la a “qabadsiiyay rasmi ah calaamad lagu qabtay goobta of Hall Weyn”. dabaal Tani waxaa la sheegay in lagu qabtay by Professor Godfrey Tanner kaas oo la sheegay in ay ku shubtay qurbaanno cabniin ah khamri gal dhulka sida in “quduus ka dhig dhulka ku kor yaal oo University oo ku nasanaya”. Tan iyo markii ay jaamacadda farsamo noqday goboleedka on 1 January 1965 maalinta madax-bannaani waa in lagu qabtay 1 January. 1 July dhab beegantay Jaamacadda New South Wales of Technology ee madaxbannaani ka amar Guddiga Guud ee Adeegga on 1 July 1954. Sida laga soo xigtay Don Wright, ardayda fasiray Day-hoosaad sida dabaal hoosaad oo ka mid ah Jaamacadda Newcastle oo ka tirsan jaamacadda New South Wales. Ardaydu waxay xaq u leeyihiin in la siiyo dabaal wax kasta oo la micno waxay doorteen. Xaqiiqada ah in waxaa loo bixiyey 'maalin madaxbannaani' adkeeyay dareenka ardayda of muhiimadda ay leedahay in maamul hoosaad oo ay u baahan yihiin in ay difaacaan ka digtay faragelinta ka baxsan.
In 1989, habaynta Dawkins fujiyo Institute Hunter ee Tacliinta Sare ee Jaamacada Newcastle. Newcastle Macalimiinta College ayaa la aasaasay 1949 oo waxaa lagu Waayadan dambe College ee Newcastle of Education Advanced iyo ugu dambeyntii Institute Hunter ee Tacliinta Sare ee dhaafsan waxbarashada macallimiinta sidii ay ballaariyeen qurbaanno ay waxbarasho kalkaalinta, xirfadaha huwanta kale ee caafimaadka, ganacsi, iyo farshaxanka. Machadka Hunter ayaa waxaa ku yaal taxane ah oo dhismayaasha dhulka isla markiiba ku xiga si ay University ee Callaghan iyo isku darka balaariyay campus in ay qaar ka mid ah 140 hektar. Under-habeynta, University ayaa sidoo kale laga faa'iiday laan Newcastle ee Conservatorium NSW ee Music ku yaala xarunta dhexe ee ganacsiga magaalada.
In 1998, jaamacadda la aasaasay iskaashi la Wira Institut ah, dugsi Malaysia gaar ah ganacsiga. In 2002, Ian Shirkadaha, oo bare ka ah, guuldareystay tiro badan oo ah waraaqaha arday ka Wira for khayaamada waxbarasho, laakiin falalkiisa ayaa beddeli maamulka Newcastle oo uu soo saarey. ka dibna uu ka codsaday Guddiga Madaxa-bannaan ee New South Wales ee Ka hortaga Musuqmaasuqa, taas oo ka dhigtay natiijada musuqmaasuqa ka dhanka ah Dr Paul Ryder, fashilantay by xigeenka Chancellor Roger Holmes oofiyo uu waajib ah oo lagu talinayaa edbinta ku xigeenka xigeenka Chancellor, Professor Brian Ingiriisi.
In 2003, Jaamacadda Newcastle, wada jir ah ula shan jaamacadaha kale ee Australian (Macquarie, La Trobe, Flinders, Griffith iyo Murdoch) aasaasay Cusub oo Research Jaamacadaha Australia (ruux).
Afartan sano ka dib helo madaxbannaani, Jaamacadda Newcastle ayaa sameeyay meel sumcad ee kala horeynta jaamacad qaran iyo heer caalami; kaalinta 10-14 kala duwan oo ka mid ah 38 jaamacadaha ku yaalla Australia by Shanghai Jiao Tong University iyo 215th ee dunida by Supplement Tacliinta Sare Times in 2007.
Jaamacadda bandhigay logo cusub 31 March 2007 oo qayb ka ah brand ah u raaxayn in ay waafajiyaan image jaamacadda ee dheeraad ah si dhow ula ay jihada cusub ee istiraatiijiga ah.
On 11 Laga yaabaa 2007, jaamacadda bilaabay campus a at laba xarumood weyn ee Singapore Academy PSB ee. On 30 July 2015, Madaxweynaha Tansaaniya Jakaya Kikwete wuxuu ahaa madaxa ugu horraysay ee gobolka in la abaal shahaado sharaf (Doctor of Sharciyada) by jaamacadda.
Ma rabtaa wada hadlaan The University of Newcastle ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: The University of Newcastle rasmiga ah Facebook
The University of dib u eegista Newcastle
Ku biir si ay ugala hadlaan of The University of Newcastle.